Guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray bayaan ay ku shaacinayaan jadwalka ay ku dhaceyso doorashada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray bayaan ay ku shaacinayaan jadwalka ay ku dhaceyso doorashada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Allhadaaftimo December 23, 2020 Uncategorized
War saxaafadeedka ayaa lagu qeexay in marka ugu horreysay la guda gali doono hannaanka doorashada Aqalka sare.
Waxaa bayaanka lagu yidhi: “Sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wadatagisha qaran ee la gaaray 17-kii September, waxaa lasoo hormarinayaa doorashada xildhibaannada Aqalka Sare oo ay qabanayaan baarlamaannada dowlad goboleedyadu. Sidaa darteed, diiwaan galinta tartamayaasha doorashada Aqalka Sare waxay billaabaneysaa 26-ka December, 2020-ka, halka laga sugayo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada in liiska musharraxiinta ay soo saaraan 29-ka December, 2020-ka, waxaana doorashada kuraasta golaha Aqalka Sare lagu soo dhammeystirayaa inta u dhaxeysa 31-ka December ilaa 6-da January, 2021-ka.”
“Guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay sidoo kale 7-da January 2021-ka gudagalayaan diiwaan galinta, xaqiijinta iyo tababarista xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee ka qeyb galaya xulista ergooyinka doorashada, kuwaas oo lagu faahfaahiyay shuruudahooda habraacyada doorashada.”
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa sheegay in uu rajeynayo in dhammaan daneeyeyaasha arrimaha doorashooyinka ay si hufnaan leh uga wada qeyb qaataan tartanka doorashada, beelaha Soomaaliyeedna ay kaalintooda ka qaataan howlaha doorashada, xulista ergooyinka iyo ka qeybgalka tartanka kuraasta labada Aqa
Previous MD Guudlaawe oo shir guddoomiyey Kulan looga hadlayey Amniga deegaanada Hirshabeelle
Next Madaxweyne Qoor Qoor”waxaa lagu dhaqmi doonaa heshiiskii 17-kii September la gaaray”